Nezvedu - Jiangsu Apex Solar Energy Technology Co., Ltd.
Jiangsu Apex Solar Energy Technology Co, Ltd.
Jiangsu Apex Solar Energy Technology Co, Ltd. inyanzvi yekugadzira uye kuburitsa kunze kwepaneru yezuva kweanopfuura makore gumi. Isu takasarudzika mukugadzira, kugadzira uye kutengesa kwemaseru ezuva, photovoltaic module uye maseru ezuva.
Apex Solar ine hunyanzvi R&D uye manejimendi timu, inoteedzera inoteedzera epasirese bvunzo zviyero zveTUV, CE, CEC, CQC, ISO9001, ISO14001. Panguva imwecheteyo, Apex Solar yaigona kupa zvakagadziriswa kugadzirwa uye makore gumi nemaviri chigadzirwa garandi uye makore makumi maviri emagetsi warandi. Kusvikira ikozvino, epex solar solar module anosanganisira monocrystalline uye polycrystalline mhando akaiswa kune iyo pane grid, kubvisa grid uye masystem masystem mumusika weEuropean nyika, Australia, Canada, South America, Africa, Middle East neAsia. Tinotenda kuti zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye nekukurumidza kutumira zvinogona kuunza kubatana kwenguva refu. Kugutsikana kwevatengi isimba redu rekutyaira kufambira mberi.
Apex Solar yakaunza epamberi otomatiki yekugadzira michina kuburitsa yakavimbika emagetsi ezuva ezvese kune vese vatengi, iyo fekitori muVietnam ine pagore inokwana 200MW, chiChinese yekugadzira kugona kwePV module yasvika 600MW pagore, yakazara 800MW pagore yekugona kugona. Iko kune yakazara QC system yaifunga kutanga kusvika kumagumo. Zvese zvinoshandiswa mbichana zvinoshandiswa zvinobva kuTier 1 vatengesi, inunura zvigadzirwa zvemhando imwechete sezita zita revanogadzira module yezuva muChina nemutengo wemakwikwi.
Inopfuura makumi mashanu nyika dzekuenda
Ese mapaneru ezuva anogadzirwa neA magiredhi maseru, Zvese mbishi zvinhu zvinoshandiswa zvinobva kune Tier 1 vatengesi
Kupfuura 2GW yeMamojimendi ekuisa application
Kupfuura 3GW kutumirwa kugona